क्यानाडा ईमेल ठेगाना सूची | क्यानाडाई व्यापार | पछिल्लो मेलिiling डाटाबेस
क्यानाडाली ईमेल सूची
नवीनतम मेलिङ डाटाबेस » क्यानाडाली ईमेल सूची
क्यानाडा ईमेल ठेगाना सूची
क्यानाडाली ईमेल ठेगाना सूचीले क्यानाडा व्यवसाय र क्यानडा उपभोक्ता ईमेल डाटाबेस समावेश गर्दछ। हामी तपाईंलाई विश्व उत्तम उच्च गुणवत्ता र सबै भन्दा लोकप्रिय ईमेल डाटाबेस प्रदान गर्दछौं। तपाईं हाम्रो क्यानेडाली ईमेल सूचीबाट अधिक र अधिक बिक्री प्राप्त गर्नुहुनेछ। हाम्रो सबै डाटाबेस पहेंलो पृष्ठहरू, सेतो पृष्ठहरू, कर रेकर्ड आदि द्वारा प्रमाणित छ।
क्यानाडा ईमेल ठेगाना सूची क्यानाडा मा बाट एक उत्तम मेलिंग डाटाबेस हो। तपाईं यस क्यानेडियाली ईमेल सूचीबाट मात्र वैध नेतृत्व प्राप्त गर्नुहुनेछ किनकि हामीले अपडेट गरेका सबै लीडहरू मासिक आधारभूत हुन्छन्। यस क्यानेडियाली ईमेल सूचीले तपाइँको कम्पनीमा बिक्री ल्याउन मद्दत गर्दछ।
व्यवसाय र व्यक्तिगत जानकारीको साथ क्यानाडाली ईमेल सूची। भर्खरका मेलि Dat डाटाबेसले क्यानाडेली ईमेल सूची फाइलबाट सबै प्रमाणित र प्रत्यक्ष बिक्री प्रदान गर्दछ। तपाईले सहि क्यानेडियाली ईमेल सूची मात्र पाउन सक्नुहुन्छ जुनमा सबै व्यवसाय र व्यक्तिगत सम्पर्क जानकारी हुन्छ।
यदि तपाईं आफ्नो विशिष्ट क्यानाडा ईमेल ठेगाना सूची निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने हामीसँग विशेष क्यानेडियन ईमेल सूचीहरूको लागि राम्रो डाटाबेस बिल्डर टीम छ।
क्यानाडा B2B ईमेल ठेगाना
क्यानाडा व्यवसाय ईमेल डाटाबेस मा क्यानाडा स्थानीय व्यापार सम्पर्क डाटाबेस सामेल छ। तपाईं क्यानाडाबाट सबै सक्रिय व्यापार सम्पर्क डाटाबेस प्राप्त गर्नुहुनेछ। यस क्यानाडा व्यवसाय ईमेल डाटाबेस क्यानाडा मा तपाइँको व्यापार को स्थापना को लागी मद्दत गर्दछ। ब्यापार ईमेल सूचीमा केवल प्रमाणित सम्पर्क विवरणहरू छन्। पूर्ण सम्पर्क जानकारीको साथ 90% सटीक डाटा।
क्यानाडा B2B ईमेल डाटाबेस किन्नुहोस्
रेकर्डको मात्रा: १.3मिलियन
* पहिलो नाम * व्यवसाय नाम * ठेगाना * शहर * जिप कोड * राज्य
* ईमेल ठेगाना * फोन नम्बर * फ्याक्स नम्बर * वेबसाइट ठेगाना
मूल्य: $ 600
नि: शुल्क नमूना बनाउनुहोस्
क्यानडा उपभोक्ता ईमेल डाटाबेस
क्यानाडा B2C ईमेल ठेगाना
क्यानडा उपभोक्ता ईमेल सूचीमा क्यानाडा स्थानीय सबै व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पर्क विवरणहरू समावेश छन्। तपाईं यो क्यानडा उपभोक्ता ईमेल सूची खरीद गर्न सक्नुहुनेछ किनभने क्यानाडामा तपाईंको सेवा प्रमोट गरियो। साथै यदि तपाईं क्यानाडाबाट कुनै खास डाटा लिन चाहानुहुन्छ भने हामीलाई भन्नुहोस्। हामी तपाईंलाई तपाईंको आफ्नै क्यानाडा ईमेल सूची निर्माण गर्न मद्दत गर्दछौं। हाम्रो सबै रेकर्डहरू मान्य छ र अद्यावधिक पनि छन् सबै सूचिहरूमा ओपीटी छ।
सबै भन्दा माथि क्यानाडाई उपभोक्ता ईमेल सूची को विवरण छ।
क्यानाडा B2C ईमेल डाटाबेस किन्नुहोस्
रेकर्डको मात्रा: 12 लाख
* पहिलो नाम * सम्पर्क नाम * आयु * ठेगाना
* इ - मेल ठेगाना * IP ठेगाना * फोन नम्बर
मूल्य: $ 1500
क्यानाडाई ईमेल सूची प्रश्न र उत्तर
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रत्येक महिना हामी हाम्रो सम्पर्क ठेगाना अपडेट गर्दछौं। हामी अधिक स्रोतहरूबाट हाम्रो डाटा निर्माण गर्दछौं। त्यसैले प्रत्येक महिना डाटा प्राप्त पछि, हामी अपडेट गर्छौं।
त्यस पछि, hours घण्टा भित्र अर्डर गरेर तपाईंको डाटा डेलिभर हुनेछ र कस्टम सम्पर्क डाटाको लागि हामी डाटा निर्माण गर्न अधिकतम hours२ घण्टा लिन्छौं।
अन्तमा, हामी तपाईंलाई 95%% शुद्धता डाटा प्रदान गर्दछौं। हाम्रो सबै सम्पर्क ठेगाना मानव र कम्प्यूटर आँखा प्रमाणित छ।
जहाँसम्म, हामी व्यापार सम्पर्क ठेगाना डाटा उपभोक्ता सम्पर्क ठेगाना डाटा र कम्पनी सम्पर्क व्यक्ति कम्पनी कर्मचारी शीर्षक र काम प्रकारको डाटा द्वारा डेटा प्रदान गर्दछौं। साथै तपाई ई-मेल सूची निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ लक्षित व्यक्तिको सम्पर्क जानकारी उद्योग वा देशले राज्य र शहर द्वारा।
यो ईमेल सूची ताजा छ?
जे होस्, सबै ईमेल सूची ताजा र हाम्रो टीम द्वारा सफा गरीएको छ।
के म यसलाई मेरो सीआरएममा प्रयोग गर्न सक्छु?
अर्को शब्दहरुमा, यो कुनै पनि crm प्लेटफार्म प्रयोग गर्न को लागी तयार छ।
के म लक्षित सीसा निर्माण गर्न सक्छु?
थप रूपमा, यदि तपाईं एक लक्षित लीड्स निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंको लागि निर्माण गर्नेछौं।
थप रूपमा, हामी २०१२ मा व्यापार गर्दैछौं। डेटा प्रदायकका लागि हामी एक मात्र ठूलो कम्पनी हो। सबै सम्पर्क ठेगाना%%% सहि छ। यदि तपाईंले 2012% भन्दा बढी बाउन्स डाटा पाउनुभयो भने हामी हाम्रो डेटा प्रतिस्थापन गर्नेछौं। त्यो हाम्रो ग्यारेन्टी हो।
अर्को शब्दहरूमा, हामी तपाइँलाई तपाइँको अर्डर गरिएको सम्पर्क ठेगानाको लागि उत्कृष्ट वा CSV ढाँचा प्रदान गर्दछौं।
यसबाहेक, हाम्रो सबै सम्पर्क ठेगाना एक अनुमति आधार हो र GDRP तयार छ।
अन्तमा, हाम्रो डाटा स्रोत विभिन्न प्लेटफर्म हो। हामीले विश्वसनीय डाटाबाट सबै डाटा लग्यौं र डाटा स्रोत मात्र अप्ट इन गर्‍यौं। हामी व्यापार स्रोत र उपभोक्ता स्रोतबाट ईमेल सूची निर्माण गर्छौं।
ईमेल ठेगाना सक्रिय वा मान्य छ?
यसबाहेक, सबै ईमेल ठेगाना सक्रिय छन् र बाहिर निस्किनुहोस् यदि कुनै ईमेल ठेगाना मान्य छैन भने हामी तपाईंको पैसा फिर्ता गर्नेछौं।
ईमेल मार्केटिंग सूची मितिमा छ?
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो सबै ईमेल मार्केटिंग सूची अप टु डेट छ र भर्खरै अपडेट गरिएको छ।
यो ईमेल मार्केटिंग सूची बिक्री नेतृत्व ल्याउन?
अर्को शब्दहरूमा, हो हाम्रो टेलीमार्केटिंग सूचीले तपाईंको कम्पनीको लागि अधिक बन्द बिक्री नेतृत्व ल्याउँछ
ह Hongक Kong फोन नम्बर सूची
सबै भारत फोन नम्बर सूची
नेटवर्क मार्केटिंग सम्पर्क सूची
अफगानिस्तान कल फोन नम्बर
अधिवासी निवासी पत्राचार सूची
अल्बानिया फोन नम्बर सूची
अल्जेरिया मोबाइल डाटाबेस सूची
लेखाकार ईमेल सूची
अर्जेन्टिना टेलिफोन नम्बर सूची
आर्मेनिया टेलमार्केटिंग सूची